China EAS Antenna Clothing Store Security System Anti-ezu ohi mkpu nke AM 58khz EAS Antenna-PG200 ndị na-emepụta na ndị na-ebu ya | Etagtron
uwe ahịa mkpu mkpu ohi usoro
•Padị acrylic dị uzo na-echekwa ụlọ ahịa aesthetics
•Agbanye 2.5m (8ft 2in) arụmọrụ nchọpụta ụwa na-echekwa akụ dị oke egwu
•Ihe mmetụta sensọ ndị mmadụ na-agụkọ ọnụ na-ejide eleta ụlọ ahịa iji nyere aka bulie arụmọrụ ụlọ ahịa
•Single, abụọ na multiple mpi maka nhọrọ, izute ahaziri mkpa
Usoro EAS AM
Main nkọwa nke ụlọ ahịa nche mmetụta:
1.High ọkọlọtọ & mara transperent acrylic ihe onwunwe. Eguzogide elu okpomọkụ & elu nsogbu; ihe omuma, odi nma ma di mfe.
2.Master-ohu convergence, nkịtị ọrụ site na otu poolu; circuit ntanye onwe; ihe efu efu, mmekorita na-ejide onwe ya, inwe uche ziri ezi; Unique ụda na ìhè mkpu; Nwere ike ịchọpụta ihe niile 58kHz dị nro, mkpado siri ike na mkpado 58kHz pụrụ iche.
3.Unweghi ike ikwusi ike na nyocha nke ohi na ogologo ọrụ ndụ ma e jiri ya tụnyere ngwaahịa ndị nkịtị;
4.Ngozi teknụzụ nhazi dijitalụ dị elu nwere ike iduzi nyocha onwe onye oge yana njikwa uru akpaka na gburugburu ya.
Ihe mkpuchi Mgba
Ike na a pụrụ ịdabere na, mgbochi nkukota na waterproof
♦Otu mpempe antenna nwere ike ikpuchi nchọpụta dị site na 0.5m ruo 2.4m (Dabere na ọnọdụ ahụ n'ezie), Ebe nchekwa kachasị dị n'etiti antennas abụọ nwere ike iru 1.5m na akara ngosi dị nro DR. Chebe ọnụ ụzọ obosara 5.8m na antennas atọ na-arụ ọrụ synchronously . A na-ejikọ ya na mma nke ụlọ ahịa ahụ, na-echekwa obosara nke ụlọ ahịa mkpọsa dị iche iche; yabụ ọ dabara maka nnukwu ụlọ ahịa.
Osote: EAS ọnụ ala uwe m mgbochi na-ezu ohi digital epaper price tag AM DR labeelu mkpado